China Die Casting ၀ န်ဆောင်မှုများ - အွန်လိုင်းမှတိုက်ရိုက်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ မင်္ဂလာ Casting ကိုမှာယူပါ
One-Stop Die Casting နည်းပညာများ၊ စံနှုန်းတစ်ခု - အချိန်အရည်အသွေး
Die Casting သည်အရည်ကိုသွပ်သတ္တုများကိုရှုပ်ထွေးသောပုံသဏ္withာန်များဖြင့်အတင်းဖိအားပေးရန်မြင့်မားသောဖိအားကိုအသုံးပြုသည်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် Japan Die Casting Association က die casting ကို“ သတ္တုစပ်သတ္တုစပ်ကိုမြင့်မားသောအပူချိန်တွင်တိကျသောမှိုသို့ဖိအားပေးသောသတ္တုစပ်ပုံသဏ္methodာန်နှင့်အချိန်တိုအတွင်းမြင့်မားသောတိကျမှုနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောသတ္တုများပုံသဏ္surfaceာန်ထုတ်လုပ်သည်” ဟုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့သည်။ ၎င်းကို Press Die Casting ဟုလည်းလူသိများသည်။ ၎င်းပစ္စည်းများ၏ဆန့်နိုင်စွမ်းသည်သာမာန်သတ္တုစပ်သတ္တုစပ်များထက်နှစ်ဆနီးပါးရှိသည်။ ၎င်းသည်အလူမီနီယမ်အလွိုင်းမော်တော်ယာဉ်ဘီးများ၊ ဘောင်များနှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းအားသက်ရောက်မှုဒဏ်ခံပစ္စည်းများဖြင့်ထုတ်လုပ်လိုသောအခြားအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ အဓိပ်ပာယျ။
ထုတ်လုပ်မှုသံသရာကိုတိုစေပြီးသင်၏အဓိကစီမံကိန်း၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချလိုပါသလား။ အဆင့်မြင့်နည်းပညာများပေါင်းစပ်ထားသော Die Casting ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရိုးရှင်းလွယ်ကူစေပြီးစက်အစိတ်အပိုင်းများကိုကြီးမားသောအသုတ်ထုတ်လုပ်မှုကိုအရှိန်မြှင့်နိုင်သည်သာမကမြင့်မားသောတိကျမှုနှင့်အချိန်မီအရည်အသွေးကိုရရှိနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုံးစံအတိုင်းသွန်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်သော Minghe စက်ပစ္စည်းစာကြည့်တိုက်နှင့်အထွေထွေသေသပ်သောနည်းပညာများကထောက်ကူပေးသည်။ တိကျသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိခြင်း၊ သို့မဟုတ်အထူးပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများအားလုံး၏အမြောက်အများထုတ်လုပ်မှုအတွက်ရှုပ်ထွေးသောဂျီသြမေတြီကိုပြန်လည်ဖန်တီးရာတွင်အနည်းငယ်သာ Minghe Casting နှင့်လိုက်ဖက်သည်။
အဘယ်ကြောင့်တရုတ် Die Casting န်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်?
အမြန်ဆုံးကြီးထွားလာသောတရုတ်သွန်းလောင်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် Minghe တွင်အောက်ပါသတ္တုများထုတ်လုပ်ခြင်းသည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်းမှအစတိကျသောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ကိရိယာတန်ဆာပလာများအထိကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်အသုံးပြုခြင်းအထိသင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အနုပညာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသောကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူကမ္ဘာ့အဆိုးရွားဆုံးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများ၏အရည်အသွေးစံနှုန်းများ။ သူတို့ထဲကတချို့ပါဝင်သည်:
ISO ကို 9001: 2015 certified ရရှိထားပြီး
မော်တော်ယာဉ်ဖောက်သည်များအတွက် PPAP နှင့် Process FMEA ကိုတင်းကြပ်စွာလိုက်နာခြင်း
ရှေ့တန်းမှနည်းပညာသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော်လည်းနှစ် ၃၅ နှစ်ကျော်ကြိုးပမ်းခဲ့သည့်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုတည်းအတွက်သာလျှင်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောလုပ်ဆောင်မှုများဖြင့်သုံးစွဲသူများသည် Minghe Casting ကိုသူတို့နှစ်သက်သောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူအဖြစ်စိတ်ချစွာရွေးချယ်သည်။
ဖောက်သည်များသည် Minghe ၏ကျွမ်းကျင်မှုသည်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်နှင့်အခက်အခဲများကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်ဖြေရှင်းနည်းများကိုပေးအပ်ရန်ယုံကြည်ကြသည်။
ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းကိုအကြံပြုခြင်းသည်ထုတ်လုပ်မှုမြန်နှုန်းနှင့်ယူနစ်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်ရှိပြီးသားအစိတ်အပိုင်းကိုညှိနိုင်သည်။ Minghe Casting သည်သွန်းလောင်းခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးစံနမူနာဖြစ်သည်။
အစိတ်အပိုင်းများအသွင်အပြင်၊ မျက်နှာပြင်ချောချောမွေ့မွေ့ခြင်း၊ ချေးခြင်းနှင့်အခြားသေဆုံးသောသတ္တုများပုံသဏ္partsာန်၏အခြားသောစွမ်းဆောင်ရည်များကိုမြှင့်တင်ရန် Minghe die casting ထုတ်လုပ်သူတွင်စက်ယန္တရားပြုပြီးနောက်သတ္တုမျက်နှာပြင်အပြီးသတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
Minghe Die Casting Services ၏ကောင်းကျိုးများ
ယေဘုယျအားဖြင့်အအေးခန်းသေခံသောသံမဏိစက်သည်တစ်နာရီလျှင်အကြိမ် ၅၀ မှ ၉၀ အထိသွန်းလောင်းသည်။
အပူပေးခန်းသည်တစ်နာရီလျှင်အကြိမ် ၄၀၀ မှ ၉၀၀ အထိပုံသေစက်ဖြစ်သည်။
သေဆုံးသောသတ္တုများပုံသွန်းခြင်းအပိုင်း၏ယေဘုယျသည်းခံမှုအမျိုးအစားမှာ GB / T 13-15 တွင် IT1800 ~ IT2009 ဖြစ်ပြီးပိုမိုမြင့်မားသောတိကျမှုသည် IT10 ~ W 1 1. Surface finish (Ra) သည် 3.2 ~ 1.6μmဖြစ်ပြီးဒေသတွင်းတွင်0.8μအထိရှိသည်။
အလူမီနီယမ်အလွိုင်းသေဆုံးသောသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ၏အနည်းဆုံးနံရံအထူသည် ၀.၅ မီလီမီတာဖြစ်သည်။
သွပ်သတ္တုစပ်သွပ်သတ္တုများသွန်းလောင်းသည့်အနိမ့်ဆုံးနံရံအထူသည် ၀.၃ မီလီမီတာရှိနိုင်သည်
အခြားပစ္စည်းများအစိတ်အပိုင်းများကိုသွန်းလောင်းခြင်းတွင်ထည့်သွင်းနိုင်သည် - နောက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတွင်ရှုပ်ထွေးသောစွဲစေခြင်းသို့မဟုတ်ထည့်ခြင်းများပါဝင်သည်။ ဒါကြောင့်အဖိုးတန်ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုကယ်တင်။
Die Casting ၏ Minghe ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာရေး
အကောင်းဆုံး Die Casting ဝန်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်ပါ
ထုံးစံဓလေ့ တရုတ်သွန်း casting ဝန်ဆောင်မှု မော်တော်ယာဉ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ လေကြောင်း၊ အီလက်ထရောနစ်၊ အစားအစာ၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ လုံခြုံရေး၊ အချိန်တိုအတွင်းမှာအခမဲ့ကိုးကားရန်သင်၏မေးမြန်းမှုကိုပေးပို့ရန်သို့မဟုတ်သင်၏ပုံဆွဲခြင်းကိုမြန်မြန်ပို့ပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ရန်အီးမေးလ် sales@hmminghe.com ကျွန်ုပ်တို့၏လူများ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ကိရိယာတန်ဆာပလာများသည်သင်၏သေဆုံးသောစီမံကိန်းအတွက်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းအတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုမည်သို့ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်ကိုကြည့်ရန်။